Qashinka Taayirada Pyrolysis
Dufcaddii Nooca Qashinka Turos Pyrolysis Plant
Qashinka Sii Daaya Pyrolysis Plant
Qashinka Bacda Pyrolysis
Warshadda qashinka Pyrolysis
Saliida Saliida Pyrolysis
Qalabka Mashiinka Mashiinka Kaarboonka
Qashinka Qalabka Burburinta Taayirada
Qalabka Burburka Caaga
Kululeeyaha qaxa kulul
Dufcaddii Nooca Qashinka Taayirada Pyrol ...
Waxaa loo adeegsaday ka faa'iideysiga kheyraadka caaga. Iyada oo loo marayo kala-goynta buuxda ee polymer-kiciyeyaasha sare ee alaabada caagga ah ee qashinka, waxay dib ugu soo laabanayaan xaaladda moleekuleellada yaryar ama monomers-ka si ay u soo saaraan saliidda shidaalka iyo shidaalka adag. Iyada oo la raacayo ujeedada amniga, ilaalinta deegaanka, iyo howlgalka joogtada ah ee xasilloon, Dib-u-warshadaynta, waxyeellada aan lahayn, iyo yareynta caagagga qashinka. Qadka shirkadda wax soo saarka caaga ah ee loo yaqaan 'pyrolysis production line' waxay isticmaashaa soosaarayaal isku dhafan oo gaar ah iyo wakiil khaas ah oo dechlorination ah si looga saaro gaasaska aashitada sida hydrogen chloride ay soo saaraan dildilaaca PVC waqti ku habboon, iyadoo la kordhinayo nolosha adeegga.
Waxaa burburi doona jajabka taayirka ka dib marka suunka la qaado, miisaanka suunka, qalabka wax lagu kala qaado, iwm cadaadiska xun ee nidaamka pyrolysis joogto ah iyada oo loo marayo pyrolysis, nidaamka ka dib marka heerkulka falceliska wajiga gaaska uu yahay 450-550 ℃ iyadoo lagu jiro xaalad faaruq ah falcelinta, soo saar saliidda pyrolysis, kaarboonka madow, silig pyrolysis iyo gaaska guban kara, gaaska guban kara kala saarida unugyada soo kabashada saliida iyo gaaska ka dib marka la galo shooladda gubashada ee kulul, nidaamka oo dhan soo saar si loo bixiyo kuleylka falcelinta, lagu gaaro isku filnaasho xagga tamarta;
Khadka wax soo saarka taayirrada qashinka qashinka waa qalab ballaaran oo dhammaystiran oo gabi ahaanba kala soocaya saddexda alaab ceyriin ee waaweyn ee ku jira taayirka: caag, silig bir ah, iyo faybar heerkulka qolka oo ogaanaya 100% dib-u-warshadaynta. Khadka wax soo saarka taayirka qashinka qashinka ayaa dib u warshadeyn kara taayirro dhex dhexaad u ah 400-3000mm iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka, iyadoo lagu dabaqayo xoog leh, cabirka wax soo saarka waxaa lagu xakameyn karaa inta u dhexeysa 5-100mm, wax soo saarkuna wuxuu gaari karaa 200-10000kg / h . Khadka wax soo saarku wuxuu ku shaqeeyaa heerkulka qolka mana u keeni doono wasakheynta labaad deegaanka. Khadka wax soo saarku wuxuu qaataa nidaamka xakamaynta PLC, kaas oo si sahlan loo shaqeyn karo loona ilaalin karo, iyadoo la isticmaalayo tamar yar iyo nolol dheer.
Kuleyliyaha kuleyliyaha wuxuu tixraacayaa kuleeliyaha, kuleylka kuleylka shidaalka iyo kuleeliyaha gaaska ayaa ah kan ugu muhiimsan ee caawiya qalabka kaabayaasha, kuleeliyaha kuleylka inta badan waxaa loo qaybiyaa shidaal gubiyaha iyo gaaska gubi iyo labada shidaal gubiyaha, oo ay kujiraan shidaalka gubi karaa waxaa loo qeybin karaa saliid khafiifa saliida culus, saliida fudfudud waxay inta badan loola jeedaa naaftada, saliida culus waxaa loola jeedaa baatrool soo saarida saliida, saliida naaftada inta ka hartay saliida culus; gubida gaaska waxaa loo qaybin karaa gaaska dabiiciga, kuwa gaaska magaalada guba, kuwa wax guba ee LPG iyo kuwa biogas gubi.
Foornada qaraxa kulul waa nooc ka mid ah qalabka kululaynta ee leh waxtarka sare iyo keydinta tamarta. Heerka kuleylku waa dhakhso, oo waxay qaadataa oo keliya 20 daqiiqo oo kuleylka illaa hawlgalka caadiga ah. Darajada sare ee otomatiga, heerkulka dabaysha ayaa si aan macquul ahayn loogu hagaajin karaa inta u dhexeysa qiimeynta Hawada kulul waa mid deggan oo saxnaanta xakamaynta heerkulka waxay ku jiri kartaa ± 5 ℃ .Badbaado iyo kalsooni, qalab nabadgelyo oo dhameystiran.
Xuddunta caaga ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dib-u-warshadaynta qashinka caagga ah iyo warshadda qashinka ah ee dib-u-warshadaynta awoodda mootada mashiinka mashiinka u dhexeeya 3.5 iyo 150 kilowatts, xawaaraha gawaarida gawaarida gawaarida guud ahaan waa inta u dhexeysa 150 iyo 500rpm, qaabdhismeedka wuxuu leeyahay quudin la taaban karo, dhibcaha ugu sarreeya; Mindida rullaluistemadka waa ka duwan yahay rullaluistemadka mindi adag iyo duubista mindi godan.
Waxyaabaha uu jebiyey daanka burburay, hoosta ficilka wiishka baaldiga, ayaa loo diray weelka keydinta, ka dib markii loo maro sheybaarka birqaya ee elektromagnetic-ka ah wuxuu si siman oo habsami leh u geyn doonaa qalabka Raymond ee shiidi doona, ka dib markii budada wax shiida ee ku hoos jirta falka mashiinka afuufa uu garaacayo falanqaynta kala soocida mashiinka, ka dib kala soocida walxaha ka imanaya dhuumaha ilaa duufaan weyn si loo ururiyo budada, goor dambe soo saarida afka siideynta, si loo dhameystiro howlaha shiidan ee kaarboonka madow.
Saliida pyrolysis ee ay soo saaraan bacda qashinka iyo taayirka qashinka mar kale ayaa la sifeeyaa. Tusmada ugu weyn ee farsamada waxay gaari kartaa heerka 0 # ama -10 # saliid naafto ah waana la isticmaali karaa halkii kan dambe. Qiimaha waxaa sidoo kale lagu kordhin karaa $ 230 / tan tan saliida ceyriin.
Waxaa loo isticmaalaa yareynta, daaweynta aan waxyeelada lahayn iyo ka faa'iideysiga kheyraadka si loo xaqiijiyo dib u hagaajinta carrada. Adoo kala soocaya biyaha iyo walxaha dabiiciga ah ee ku jira carrada, saliida macdanta ee ku jirta badeecada adag ka dib daweynta dildilaaca waxay ka yar tahay 0 05%. Iyada oo la raacayo qoddobada amniga, ilaalinta deegaanka, iyo hawlgal joogto ah oo xasilloon, Dheecaanka Dufanka, daaweynta aan waxyeellada lahayn iyo ka faa'iideysiga kheyraadka.
Qashinka adag ee dawlada hoose iyo qashinka guryaha ee guud ahaan waxay ka kooban yihiin waxyaalaha maalinlaha la isticmaalo ee la tuuro.
Qashinka guryaha ee magaalooyinka iyo qashinka guryaha guud ahaan waxay ka kooban yihiin waxyaabo maalin kasta la isticmaalo oo la tuuray. Qashinka noocan ah ee caadiga ah waxaa badanaa lagu ridayaa bac madow ama qashin qashin, kaas oo ay kujiraan isku dar ah walxo dib loo cusbooneysiin karo oo qoyan iyo qalalan, dabiici ah, maaddooyin aan dabiici ahayn iyo kuwa nooci kara.
Qalabka daaweynta qashinka gudaha ee ay baareen oo ay soo saartay shirkadeena ayaa si buuxda otomaatig uga ah quudinta ilaa dhamaadka howlaha kala soocida. Waxay socodsiin kartaa 300-500 tan maalintii oo kaliya waxay ubaahantahay 3-5 qof oo shaqeeya. Qalabka oo dhan uma baahna dabka, alaabada ceeriin ee kiimikada, iyo biyaha. Waa mashruuc dib-u-warshadaynta deegaanka looga baahan yahay gobolka.
Habka loo yaqaan 'pyrolysis' waa mid ka mid ah hababka dhammeystiran oo qiime sare leh ee lagu daweeyo taayirada qashinka. Iyadoo loo marayo tiknoolajiyada pyrolysis ee qalabka daaweynta taayirada qashinka, alaabta ceyriinka ah sida taayirada qashinka iyo caagagga qashinka ayaa laga baaraandegi karaa si loo helo shidaal, kaarboonka madow iyo silig bir ah. Nidaamku wuxuu leeyahay astaamaha sifir la'aanta iyo waxsoosaarka saliidda ee sarreeya.
513 Guangzhou North Road, Magaalada Jiaozhou, Qingdao, Shiinaha
Sifee caag ah, Taayirada Pyrolysis, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Warshad Pyrolysis joogto ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Dufcaddii Pyrolysis Plant,